Imidlalo Yakudala Esadlalwa Yizingane Emakhaya – The Ulwazi Programme
Emiphakathini kunemidlalo edlalwa izingane ezikoleni ngezikhathi zekhefu noma emakhaya. Lemidlalo yenza abantwana bahlale bephilile bangangenwa imikhuhlane kalula futhi ukudlala kuqaqa nemiqondo yabo, kanti yenza nemizimba iqine. Esikhathini samanje izingane azisayinaki lemidlalo ngenxa yokushintsha kwesikhathi njengoba sekwabakhona omabonakude, amabhayisikili, izimoto ezihamba ngamalahle, amakhompyutha, omakhalekhukhwini njll. Lezinto izona ezenza ukuthi izinga lokudlala imidlalo eyayidlalwa kudala lehle. Nansi eminye yemidlalo yakudala:
Uqithi umdlalo odlalelwa esihlahleni, awukhethi ubulili udlalwa abafana namantombazane. Kudingeka wonke umuntu owudlalayo akwazi ukugibela esihlahleni aze afike esicongweni. Lomdlalo uma udlalwa kudwetshwa isiyingi ngaphansi kwesihlahla ekudlalelwa kusona, kuthi phakathi kulesisiyingi kudwetshwe umugqa oyisiphambano, kulowomugqa kubekwa induku, bonke abadlalayo bama ngaphansi kwesihlahla. Kukhethwa umuntu oyedwa ozobala agcine emashumini amabili (20), kufanele kuthi uma eqeda ukubala bonke abadlalayo bebe sebegibelile esihlahleni, lona osuke esele phansi ube eseyagibela naye afike athinte lowo azomfica bese ethi “thashi” bese ehla afike athathe induku ayitshinge kude, lo ozokwehla uzoqale ayobheka induku ayibuyisele esiyingini bese naye egibela aye kothasha omunye njalo njalo. Uma kwenzeka ethe uthasha omunye kwavele kwehla omunye abengamnakile athi “qithi” kuba igemu bese beqala phansi. Lomdlalo uba mnandi kakhulu uma nibaningi.
Umdlalo wokufihla ibhande kusetshenziswa ibhande noma okusantambo ukuwudlala bonke abadlalayo bayahamba basithele kusale lowo osuke ephethe ibhande ukuze alifihle bengaboni, uma eselifihlile uyababiza baqale ukulifuna, uma sebelibheka lowo olifihlile kunezinto azishoyo uma kukhona osondela ngalapho elifihle khona athi: “kuyafudumala, kuyashiya noma kuyabila” uma bengasondeli ngalapho kufihlwe khona ibhande uyaye athi kuyabanda. Lowo olitholile uyabagijimisa, abashaye ngalo abanye babaleke bayosithela bese esala elifihla kanjalo nomunye wenza okufanayo. Lomdlalo isikhathi esiningi wawugcina ngezinyembezi ngoba phela kukhona ababeshaya kakhulu.
Umdlalo umgcwabo udlalwa ngamakopi amaningi ubamnandi uma abantu abawudlalayo bebaningi. Udlalwa kakhulu amantombazane. Amakopi abawasebenzisayo yilawo abawagcinayo uma emakhaya kade kuthengwe ukudla okusekopini njengojamu, inhlanzi, ikhofi nokunye uma sekuphelile izingane ziyawaqoqa zidlale ngawo. Lomdlalo udlalwa nangebhola elakhiwa ngopulasitiki namaphepha. Amakopi ayavuswa ame bese kuthi labo abasuke beqala ukudlala oyedwa wabo awashaye ngebhola bese eyawa, uma esewe wonke kufanele bazame ukuwavusa, akubilula ngoba laba abanye bayabavikisa uma bezama ukuwavusa uma umuntu limshayile ibhola uyaphuma alinde ukuthi abangakubo bakwazi ukuwavusa wonke ukuze bawashaye futhi naye abe yingxenye yomdlalo. Uma behlulekile ukuwavusa wonke kudlala abanye nabo babavikise. Lomdlalo ufuna umuntu okwaziyo ukuvika kanye nokugijima.